Ngaba i-MK-677 (Ibutamoren) isebenza kakuhle kulwakhiwo lweMisipha? Ukuhlolwa kwakhona
/Blog/Ithala/Ngaba i-MK-677 (Ibutamoren) isebenza kakuhle kulwakhiwo lweMisipha? Uphononongo lweSarm [2019 NTSHA]
ezaposwa ngomhla 09 / 29 / 2019 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ithala.
I-1.Yintoni iMK-677 (Ibutamoren)?
I-MK-677 (i-Ibutamoren) i-powder (159752-10-0) yinto entsha ye-hormone yokukhula kwe-siriagague (GHS). I-hormone yokukhula eyimfihlo luyinto eyenzelwe ukusebenza njenge-secagague yokuncedisa ukunyusa amanqanaba okukhula kwehomoni. Ukukhula kweehomoni kuyimfuneko ukuze umzimba wakho usebenze ngokufanelekileyo. Oku kuya kukunceda ukuba uphucule ukukhula kwezicubu zomzimba.
I-MK-677 (Ibutamoren) ipowder ayiphazamisi ezinye iinkqubo zomzimba kunye zebhayiloji njengemveliso yehomoni yendalo. Kuthetha ntoni oku ukuba uya kuba nakho ukunyuka kwamanqanaba okukhula kwamahomoni ngaphandle kokufumana iziphumo ezibi njengokucinezelwa kwe testosterone. I-MK 677 izibonelelo zokwakha umzimba zininzi kodwa siza kuzixoxa zonke kamva kweli nqaku.
2. Kutheni iMK-677 (Ibutamoren) inegama elahlukileyo?
I-Ibutameron ikwabizwa ngokuba yi-mk677 i-nutrobal, i-Ibutamoren Mesylate kwaye abanye abantu banokuyibiza ngokuba yi-MK 677 (Ibutamoren) i-powderarm. Onke la magama abhekisa kumatshini omnye. Kungenxa yokuba abanye abantu bayayithengisa indawo njengesixhobo kodwa ezinye iingcali zithi ayisiyohlobo losapho lweemarmu.
I-Ibutamoren ikwajongwa njengechiza elikhethekileyo kuba kunqabile ukufumana ichiza elinamandla okukhuthaza amanqanaba okukhula kwehormoni kunye ne-IGF-1 (insulin-like ukukhula factor).
3. Isebenza njani iMK-677 (Ibutamoren)?
I-MK-677 (Ibutamoren) ipowder (159752-10-0) Isondlo sisebenza ngokwandisa imfihlo yehomoni yokukhula (GH) kunye nezinto ezikhulayo- 1 (IGF-1) .Kukwenza oku ngokuxelisa indlela esebenza ngayo i-hormone yegrelin. IGhrelin yi-hormone eyenzeka ngokwendalo ukuba awuzange uvele kuyo ngaphambili.
Oku kuyenza ukuba ibophe ngokulula kwenye ye-GHSR (i-ghrelin receptors) yengqondo. Nje ukuba ivuselelwe, i-ghrelin receptors emva koko isebenze ukukhula kwemveliso ye-hormone kwingqondo. Isebenza njenge-neuropeptide kwi-CNS (inkqubo yangaphakathi yeeseli). Le hormone ithandwa ngamandla ayo okukhuthaza umdla.
Ikwalawula ukuhanjiswa kwamandla kwimizimba yethu kwaye inefuthe kwindlela umzimba ugaya ngayo amafutha. Kananjalo inokuchaphazela amandla omzimba ukuba abuyele kwimeko ezinjengokukhuluphala kunye nesifo seswekile se-2.
Xa isetyenziswa ngokwayo, i-mk 677 inamandla okunyusa ukuvelisa kwe-HGH ngaphandle kokuphazamisa nayiphi na i-hormone. Uninzi lwabo bayithathileyo bayakudumisa nokongezwa kwe-mk 677 kuba ayicinezeli amanqanaba akhoyo e-testosterone kunye namahomoni okukhula, okuyibhonasi enkulu ukuba ucinga ngezibonelelo.
4. Izibonelelo ze-MK-677 (Ibutamoren)
Ukukhula kweMisipha kunye nokuBuyisa
Enye yeenzuzo eziphambili ze-mk 677 kukuphuculwa kokukhula kwemisipha kunye nokubuyisela kwakhona. Ukusukela ukuba i-mk 677 isongezelelo inyusa i-IGF-1 kunye nenqanaba le-GH umsebenzisi angabeka ubukhulu obukhulu ngokulula. Oku kuxhaswe kuphando nakwisayensi. Izifundo ezenziweyo zibonise ukonyuka okukhulu kwe-mussle mass ikakhulu kubantu abakhulayo ukunqongophala kwe-hormone kunye namadoda amadala ingakumbi iminyaka ye-60 nangaphezulu. Uninzi lwe-mk 677 uphononongo lwabasebenzisi kwakhona licebisa ukuba eli chiza linesiphumo esihle sokwakha izicubu zomzimba.
Njengezilonda zobudala, uxinzelelo lwethambo luyancipha. Uninzi lwabantu abadala luhlushwa bubuthathaka bethambo kunye nethambo elibangela ukungabikho kokuhamba kunye nentlungu. Abanye abantwana kunye nabantu abadala abancinci banokuhamba nakule nto kodwa kunokubangelwa kukuncipha koxinano lwethambo. MK-677 isongezelelo somgubo ivuselela ukukhula kwehomoni kwaye kusebenze ukuguquka kwamathambo. Yile ndlela ichiza elikwazi ngayo ukuncedisa ukuqinisa amathambo.
Ukuthintela ukugqobhoza kwemisipha
Kwisifundo sophando lwenzululwazi olwenziwe kubantu abasibhozo abazila ukutya, u-Ibutamoren mk 677 wakwazi ukubuyisela umva ekulahlekelweni yimisipha kunye nokulahleka kweprotein. Olunye uphando lubonise ukuba iyeza lanceda abaguli abalupheleyo ababene-hip fractures bafezekisa amandla omzimba kunye nokufumana okungcono.
Ukukhula kweTendon kunye noThintelo olubi
Phantse wonke umntu owakha umzimba uyavuma ukuba ukwenzakala okuthile kuye kwalibazisa njani ukuhambela phambili kwakhe ngokubavalela ngaphandle kwindawo yokuzivocavoca kangangeentsuku, okanye kwiveki. Ukuba uqhubeka uchitha ixesha lakho elininzi kwindawo yokuzivocavoca, ukulimala akunakuphepheka. Ukonyuka okukhawulezayo kwesisindo semisipha ngenxa yeeseshoni zakho zoqeqesho olunzima, kungabeka uxinzelelo olukhulu kwizicubu zakho kubandakanya namathambo akhokelela ekulimaleni.
Xa kuziwa kulungiso lwee-tendon ezonakalisiweyo, i-ligaments, kunye namathambo, ukukhula kwehomoni kubalulekile. Ngokonyusa amanqanaba okukhula kwehomoni, i-mk 677 eyongezayo iqinisekisa ukuba izicubu ezihlangeneyo ziyalungiswa kwaye zigcinekile zisempilweni. Ukuxinana kwamathambo kuphuculwe kakhulu kwaye ke ngenxa yoko amathambo akho aya kuphucula amandla okwenza ukuba ubambe ubunzima bemisipha emininzi. Ngenxa yoko, awuyi kuphinda ubenokulimala okuqhelekileyo.
Uninzi lwabasebenzisi bayavuma ukuba mk677 ibancede ukuba khawulezisa ukulahleka kwamafutha. Iziphumo zokulahleka kwamafutha ze-Mk 677 zichazwe njengezothusayo mhlawumbi kuba i-GH yeyona nto iyi-hormone enokukunceda utshise zombini inqatha kunye namafutha e-visceral ngelixa likwenza ukuba ukhulise ubunzima bemisipha. Ngenxa yoko, i-Ibutamoren ihlala yongezwa kwiinkqubo zokubuyisela umzimba.
Ulusu olungcono, izipikili kunye neenwele
Ukukhula kwehomoni kuye kwangqinwa ukuphucula iiseli zolusu. Ukusukela i-MK-677 isebenzisa i-GH, yiyo loo nto ichiza likwazi ukuvuselela kunye nokuvuselela ukubonakala kweenwele, izikhonkwane kunye nolusu.
Enye inzuzo ye-mk 677 kukuba ivuselela i-ghrelin receptor kwaye inokubangela nootropic Iziphumo. Ngokophando olushicilelwe yi-NCBI inokunceda ukuphucula ukusebenza kwengqondo ngokuphembelela ngeendlela ezimbini ngokungangqalanga. Ezi ndlela zibandakanya ukukhulisa i-IGF-1 enceda ekuphuculeni ukugcinwa kwememori kunye nokufunda. Kwaye, ngokunyusa umgangatho kunye nenani lokulala kweREM. Ukulala kubalulekile kuba kuqinisekisa ukusebenza kakuhle kwengqondo.
Ukuthintela ukukhula kwe-hormone yokukhula
I-Mk 677 inyusa i-IGF-1, i-IGFBP-3, kunye nenqanaba lokukhula kwe-hormone kubantwana abanesifo sokukhula kwe-hormone ngaphandle kokutshintsha ugxininiso lwe-cortisol, i-insulin prolactin, iglucose, thyroxine (T4), i-thyrotropin okanye i-triiodothyronine (T3).
I-Ibutamoren ibonakalise isiphumo esifanayo kumadoda angenazintsholongwane i-GH, kodwa iglucose kunye ne-insulin yanda, nayo.
Ukukhula kwehomoni kunyusa inxeba lokuphilisa kunye nokuvuselelwa kwezicubu, ke ngoko i-Mk 677 inceda kwezi ngokwandisa amanqanaba okukhula kwamahomoni. Oku kuxhaswa ziingxelo zabakhi bomzimba ababesebenzisa ibutamoren ngaphambili.
Abantu abasebenzise i-MK-677 ngaphambi kokuxela imvakalelo yokukhululeka kwii-hangovers.
Yenza umdla wokutya
Ukuba yi-Mimetic yase-Ghrelin kufuneka ulindele ukuthatha ukutya okuninzi ngelixa uphantsi kwe-Ibutamoren. Nokuba oku kuyanceda okanye akulunganga ngokweenjongo zakho, kuya kufuneka uqonde ukuba yenye yeziphumo ezingenakuphikiswa mk 677.
I-Ibutamoren isebenza kakuhle ekomeleza ukungazinzi kwethu nokuba sempilweni. Amandla omzimba wakho wokulwa kwaye uhlale kude nexesha lokuphazamiseka kwexesha kunye ne-allergy liphuculwe kakhulu. Uza kuphila ubomi obutofotofo obugcwele uxolo lwengqondo.
5. Umjikelo we-MK-677 (Ibutamoren)
Umjikelo 1: Ukufezekisa i-Pow 677 elungileyo (i-Ibutamoren) i-powain grow, kufuneka uqale nge-10mg ngeyure nganye ye-24 kwiiveki zokuqala ze-11 ngaphambi kokuba ungeze kwi-20-25mg ngeyure nganye ye-24.th iveki. Oku kunokuthathwa njengamanzi, ngomlomo okanye nge-capsule.
Umjikelo 2: Unokuqala kwakhona nge-15mg ngeyure nganye ze-24 kwaye wandise umjikelezo wakho we-MK 677 ubude ngaphaya kweeveki ze-12. Ngokwenza njalo, akuyi kufuneka unexhala malunga neengxaki zesifo sakho esimanyumnyezi okanye ezinye iziphumo.
Umjikelo 3: Uninzi lwabakhi bomzimba abaza kufika kumjikelo womjikelo ukuze bandise idosi yabo ye-MK 677 ukuya kwi-50mg ngosuku kunye nokugcina umjikelezo we-MK 677 ubude beveki ezisibhozo.
Umjikelo 4: Ukuba ufuna ukwakha izihlunu, abasebenzisi bacebisa ukuthatha umthamo we-Ibutamoren we-30mg ngeyure nganye ye-24.
Umjikelo 5: Ukuba injongo yakho ephambili kukususa amanqatha, ke abasebenzisi abaninzi abanamava bacebisa ukuthatha i-20mg ngeyure nganye ye-24.
Umjikelo 6: Ukuba eyona njongo yakho iphilisa amanxeba, i-MK 677 dosage ye-10-20mg ngosuku iyacetyiswa.
Iindaba ezimnandi zezokuba awuzukuyidinga i-PCT (Post Cycle Therapy) ye-mk 677 kuba ayiphazamisi nakweyiphi na i-hormone.
6. Yeyiphi eyona dosage ye-MK-677 (Ibutamoren)?
Uphando lwethu kunye neengxelo ezivela kubasebenzisi abanamava zibonisa ukuba i-20mg ukuya kwi-30mg yeyona dosage ilungileyo ye-MK 677. Abanye abasebenzisi baye baxela ukuthatha ngaphezulu kwe-30mg ye-ibutamoren ngemini, kodwa oku akubonanga ziphumo ezingcono. Ubude bomjikelezo we-MK 677 ubonakalisile ukuba ubaluleke ngakumbi kunomthamo we-ibutamoren.
Kubalulekile ukuba uthathe i-ibutamoren ixesha elide. Amanqanaba okukhula kwehomoni kufuneka akhule kancinci emzimbeni wakho. Ukukhula kancinci kwamahomoni kunokuthatha ukuya kwiiveki ezimbalwa ngaphambi kokuba uqalise ukuziva iziphumo.
Injongo yakho ikwamisela inani le-mk 677 ekufuneka uyithathile. Nazi iidosi eziphakanyisiweyo zeenjongo ezahlukeneyo.
Ukwakhiwa kwemisipha: 30mg ngemini
Ukuphulukana namafutha: 20mg ngosuku
Ukuphiliswa okwenzakeleyo: I-10-20mg ngosuku
Ukuba awuzange usebenzise Ibutamoren powder (I-159752-10-0) ngaphambili, kuyacetyiswa ukuba uqale nge-10mg ukubona indlela umzimba ophendula ngayo kuyo.
7. Ngaba i-MK-677 (Ibutamoren) ineziphumo ezibi?
I-Mk-677 ineziphumo ezimbalwa kakhulu kwaye zincinci iziphumo ebezingalindelekanga ukuba zikhona, kwaye ukuba zenzeka zilawuleke ngokulula. Nazi ezinye zeziphumo ebezingalindelekanga:
Abanye abasebenzisi banokulala bengaphazanyiswa kangangeyure ezingama-12 emva kokuthatha i-ibutamoren okukhokelela kwimvakalelo yokudinwa ngokubanzi ngosuku olulandelayo. Ukuba udibana noku, kufuneka ulinganise idosi okanye uyihlule ibe kabini ngemini kwaye le mpembelelo ye-MK 677 izakuya ngokwayo.
Nangona isenokungafumaneki kubo bonke abasebenzisi, abanye abasebenzisi bayifumana imisipha ethambileyo xa uthatha ibutamoren. Esi siphumo secala leMK 677 siza kukuphelisa wakuyeka ukuthatha ibutamoren.
Unokuva ukugcinwa kwamanzi kunye nokunyuka komnqweno wokutya kodwa oku kuhlala kuphakama xa uthatha i-ibutamoren dosage ephezulu. Emva kwexesha elithile, zonke iziphumo ebezingalindelekanga ziya kuhamba ngokwazo xa uyeka ukuthatha i-X 677.
8. Buphi isiqingatha sobomi be-MK-677 (Ibutamoren)?
I-Mk 677 isiqingatha sobomi imalunga neeyure ze-24. Oku kuthetha ntoni kwithiyori kukuba umntu unokuthatha idosi yakhe yemihla ngemihla ngexesha elinye. Kodwa kuye kwaqwalaselwa ukuba, ukuba uthatha idosi enye ngosuku, amanqanaba e-hormone yokukhula kwawo anokuhamba kanye.
Oku kunokulandelwa yimvakalelo yokudinwa okanye ukunxila. Oku kunokuthintelwa kukwahlulahlula idosi yakho kubini ngalo naluphi na usuku olunye okanye usebenzise idosi ngaphambi nje kokuba ulale. Ngokwenza njalo, uyolala njengenkosi kwaye ukuvelisa kwakho akuyi kuchaphazeleka kulo lonke usuku olulandelayo.
9. Iziphumo zeMK-677 (Ibutamoren)
Zichanekile ukuthi iziphumo ze-Mk 677 ekwakhiweni komzimba kunye nolunye usetyenziso olukhankanywe ngaphambili zilungile. I-Ibutamoren yikhomponenti efanelekileyo kakhulu kuba iphucula ukwakhiwa kwemisipha, kunye nokuncedisa ekuphuculeni ulusu, iinwele kunye nokutsha kwamafutha ngokunjalo.
Abasebenzisi ababelane nge-Mk 677 ngaphambili nangemva kweefoto kunye neziphumo zabonisa ukuba ibutamoren yakwazi ukutshintsha ukwakhiwa komzimba wabo kakhulu. Bakwazi ukongeza isixa esikhulu semisipha ngelixa belahlekelwa ngamanye amafutha omzimba.
Xa i-ibutamoren isetyenziswa kunye nezinye ii-SARM zokwakha umzimba njengazo MK-2866 kwaye LGD-4033, iyakwazi ukutshintsha umzimba wakho ngokupheleleyo, inike iziphumo zokubetha kwengqondo. Kuya kufuneka uqaphele ukuba kufuneka usebenze kwaye ugcine ukutya okufanelekileyo ukuba ufuna ukufumana i-Ibutamoren powder (159752-10-0) yokwakha iziphumo zomzimba.
10. Ngaba i-MK-677 (Ibutamoren) FDA ivunyiwe?
Ukusukela i-ibutamoren iseyiyoNyango eNtsha yokuNyanga, ayikavunywa yi-FDA. Nangona kunjalo, i-mk 677 isetyenziswe ngokuvavanywa ngamanye ama-bodybuilders kulwakhiwo lomzimba abavumayo ukuba ichiza likhuselekile. Kwaye kwafundwa ngokubanzi zizazinzulu ezivumayo ukuba ichiza lisebenza ngokufanelekileyo.
11. Ngaba i-MK-677 (Ibutamoren) ikhuselekile?
I-Ibutamoren ikhuselekile ukuba ithathwe kwiidosi ezicetyiswayo. Kukhuseleke kakhulu kubantu abasempilweni. Nangona kunjalo, ukuba ichiza lithathwe kwiidosi eziphezulu kunokucetyiswa, abasebenzisi banokufumana i-edema kunye nokuqina kwemisipha. Kodwa kutheni kufuneka ufune ukuthatha iidosi eziphezulu kunethamo elicetyiswayo?
Iziphumo ezimbalwa ezinokubakho ezinokubakho zisekwa ngokwazo xa uyekile ukusebenzisa i-Ibutamoren. Ngapha koko, zilawulwa ngokulula xa usebenzisa iyeza.
12. Ngaba i-MK-677 (i-Ibutamoren) isemthethweni ukuba Uyithenge?
Uninzi lwabantu luyabuza, ngaba iMK 677 iyathengiswa? Ukuba ungomnye wabo, ungakhathazeki, siza kuwuphendula lo mbuzo apha.
Okwangoku, i-MK-677 powder (i-159752-10-0) ifumaneka ngokuthengiswa njengechiza lophando, ngoko ke, kunzima ukufumana eli chiza ukuba uthi ulifuna ngokwakha umzimba. Nangona kunjalo, uninzi lwabakhi bomzimba bathi bayithenga ukuze isetyenziselwe uphando kuphela ukuze bathethelele ukuthenga kwabo. Ngaphambi kokuba ucofe iqhosha elithi 'MK 677 thenga kwi-intanethi', qiniseka ukuba umthengisi othengayo kuye kusemthethweni kwaye kusemthethweni. Kuya kufuneka ukuba uqiniseke ukuba uthenga eyona yeyona chiza icocekileyo kuba uhlobo olungacocekanga lwesondlo lunokuza neziphumo ezibi kakhulu.
13. I-MK-677 (Ibutamoren) yokwakha umzimba
I-Ibutamoren isandula ukuthandwa kakhulu kuluntu olwakha umzimba. Esona sizathu siphambili sokuba i-mk677 i-nutrobal isetyenziswe kakhulu ekwakhiweni kwemisipha ngenjongo yokonyusa amanqanaba e-GH. Wonke umntu ekwakhiweni komzimba uhlala ekhangele phambili ekubeni yeyona nto intle nelona likhulu.
Kuba iihomoni zokukhula zidlala indima enkulu ekwakheni umzimba, bafuna ukuba kumanqanaba aphezulu kangangoko kunokwenzeka ngelixa bekhuselekile. Amanqanaba aphezulu ama-hormone okukhula, akhawuleza kwaye kulula ukuba ukwakha umzimba uyakwazi ukongeza izihlunu ezongezelelweyo.
Kuba ii-Hormones zoKukhula zixabisa kakhulu azikho ezinye izisombululo eziphathwayo zokuxhasa ukukhula kwehomoni, ngaphandle kweNutrabol. I-Mk 677 yindlela efikelelekayo ethelekiswa nayo I-HGH (ii-Hormones Zokukhula koluntu) kwaye ingawandisa ngokukuko amanqanaba okukhula kwe-hormone yomntu ukuya kwinqanaba elikhulu.
Unokwenza i-odolo ye-MK-677 ye-bulk kwi-intanethi. I-MK 677 yentengiso ifumaneka ngokusemthethweni njengekhemikhali yophando. Uya kubona kwakhona abakhi abaninzi bomzimba abathenga ibutamoren kwaye babanga ukuba isetyenziselwe uphando kuphela.
Kubalulekile ukuba uyazi ukuba iNutrobal ihlala igcwele IiSARM. Umzekelo ogqibeleleyo yindibaniselwano ye-S23, MK-677, kunye I-RAD140 (Testolone) ipowder.
Ilayibrari yeSizwe kaZwelonke yezeNyango, amaZiko eSizwe wezeMpilo, uRalf Nass, uSuzan S. Pezzoli, uMary Clancy Oliveri, uJames T. Patrie, uFrank E. Harrell, Jr., Jody L. Clasey, uSteven B. HeymsfieldMark A. Bach, uMary U-Lee Vance, kunye noMichael O. Thorner, i-MB, i-BS, i-D.Sc, Iziphumo ze-Orali Ghrelin Mimetic ekubumbeni komzimba kunye neziPhumo zeKlinikhi kubantu abadala abaNempilo: Isilingo esingaLawulwa.
UJanssen I, Heymsfield SB, uWang Z, uRoss R. I-Skeletal muscular mus and shipping in 468 men and femers older 18-88 yr. J Appl Physiol. I-2000; 89: 81-88
Adunsky A., Chandler J., Heyden N., Lutkiewicz J., Scott BB, Berd Y. ,. . . IPapanicolaou DA (2011). I-MK-0677 (ibutamoren mesylate) yokunyanga abaguli ababuyileyo ekuqhekekeni kwe-hip: isigcini-mininzi, nesingakhethiyo, isigaba se-IIb solawulo lwendawo. Oovimba be-Gerontology kunye nee-Geriatrics, 53 (2), 183-189.
I-10 edume kakhulu kwi-Anabolic Steroids Raws Material	Iimbono ezixhaphakileyo kwihlabathi le-anabolic steroids